इन्टरनेट सेवाप्रदायकको स्पिड वृद्धिको प्रचार : राउटर बेच्ने फण्डा ! | आर्थिक अभियान
इन्टरनेट सेवाप्रदायकको स्पिड वृद्धिको प्रचार : राउटर बेच्ने फण्डा !
पुस २४, काठमाडौं । काठमाडौंको कलंकी बस्ने राजेन्द्र थापा कर्मचारी हुन्। अफिसबाट कोठामा फर्केपछि अनलाइनमा बसेर साथीभाईसँग कुरा गर्न थाल्यो सम्पर्क हुँदैन ।
‘मोबाइलमा पनि नेट राम्रो नचल्ने भएपछि दिक्क छन्। नेट चलेन भनेर फोन गर्दा दिन वित्छ तर समस्या समाधान हुँदैन, भोलिपल्ट फेरि उस्तै, म त आजित भएँ’, उनी भन्छन् ।
कीर्तिपुरका एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नेटको स्पिड कम हुँदै गएर हैरान भए । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई उनले पटक-पटक फोन गरे । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी(आईएसपी) बाट भने उनले जडानको समयमा गरिएको शर्तभन्दा बढि स्पिड दिएको जवाफ पाए ।
उनले जडान गरेको कम्पनीले तोकिएभन्दा बढि स्पिडमा इन्टरनेट दिएको तर उनले जडान गरेको राउटरको क्षमता कम भएकाले यस्तो समस्या भएको भन्दै राउटरनै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव पाए। ‘मलाई जडानको बखत भएको स्पिड पुरा भए पुग्छ चलिराको राउटर किन फेर्नु’, उनि भन्छन्।
टिभी च्यानलसहित लाइन दिएका इन्टरनेटमा पटक - पटक समस्या आउनु सामान्यनै भएको छ। इन्टरनेट स्लो हुने, पटक- पटक कनेक्सन टुट्ने, युट्युव र फेसबुक सञ्जाल खोल्दा लोडिङमा समय लाग्ने समस्या आएपछि प्रयोगकर्ताले स्पिड वृद्धिको फण्डाले सेवामा गुणस्तरर नपाएको गुनासो उपभोक्ताको छ । फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटमा गतिसँग सम्बन्धित समस्या बढी देखिने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ।
इन्टरनेट आजको अनिवार्य आश्यामबहादुर भएको छ। जस्तोसुकै सूचना हेर्नुपरे पनि इन्टरनेटमै निर्भर हुने अवस्था छ। घर - घर बिस्तार भएको इन्टरनेटबाट टिभी च्यानल हेर्ने सुविधाले यसको स्तरीय सेवाको आवश्यकता बढाएको छ। खर्चका हिसाबले मोबाइल डाटा चलाएर साध्य छैन । तर सेवा प्रदायक कम्पनीले गुणस्तर सुधार्न छोडेर स्पिडवारतर्फ केन्दित हुँदा सेवामा ध्यान भने दिएको पाईदैन।
केहि समय अगाडी २५ एमबिपिएस स्पिड पाउने गरि इन्टरनेट जोडेका एक जना उपभोक्तालाई सोहि मूल्यमा २०० एमबिपिएस स्पिड दिइएको एउटा आईएसपी कम्पनीबाट एसएमएस आयो। उनले सेवाप्रदायकलाई फोन गरे र सोधे, २०० एमबिपिएस दिएको भनेपनि नआएको बताए। उनले चलाएको राउटर हटाएर अर्को राउटर किन्नुपर्ने जानकारी पाए। ‘गुणस्तर छैन स्पिड मात्रै भनेर के गर्नु’, उनले भने।
स्पिड वारले व्यवसायमै समस्या पारेको इन्टरनेट व्यवसायीनै बताउँछन्। आईएसपीएनका पुर्वअध्यक्ष भोजराज भट्ट समय अनुसारका अपग्रेड प्रविधिको प्रयोग हुनु राम्रो भएको बताउँछन्। मूल्य घट्नु र स्पिड बढ्नु राम्रो हो तर गुणस्तर बिनाको स्पिडवारले इन्टरनेट व्यवसायी र यो व्यवसायलाई नै अफ्ठेरो पार्ने उनको तर्क छ। ‘अनावस्यक प्रतिस्पर्धाले व्यवसायनै संकटमा पर्ने अवस्था छ‘, उनले भने।
नेपाली बजारमा सीजी इन्टरनेट आएपछि स्पिडवार शुरु भएको छ। सीजीले शुरुवाती समयमा व्यापार वृद्धि गर्ने नीति अनुसार विभिन्न ठूला प्याकेज सार्वजनिक गर्यो। पछि सोहि प्याकेजलाई निरन्तरता दिएपछि भने अन्य कम्पनी पनि ठूला प्याकेज सार्वजनिक गर्दै जान बाध्य भए ।
कोभिड- १९ को महामारी फैलिरहँदा नेपालमा भएको लकडाउनले लाखौं मानिसहरु घर भित्र बस्न बाध्य भएपछि इन्टरनेट बाध्यकारी माध्यम बन्न पुग्यो र यसको परिणाम स्वरुप आईएसपीहरुको व्यापार विस्तारमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।
सामसङ ग्यालेक्सी एस२२ सिरिजका स्मार्ट फोन लञ्च हुनु अघि नै फिचर्स सार्वजनिक ! [२०७८ माघ, ११]